ဇန်နဝါရီလ 2015 |9၏စာမျက်နှာ 17 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 9)
Cobham Airfilms Productions များအတွက် Burj Khalifa နှစ်သစ်ကူးရဲ့အံ့မခန်း Capture
Whiteley, Hampshire ပြည်နယ်, ဗြိတိန်, 19 ဇန်နဝါရီလ 2015: Cobham ရဲ့တစ်ကိုယ်တော် H264 HD ကိုက transmitter ဒူဘိုင်းရဲ့ Burj Khalifa အပေါ်ဗဟိုပြုသည့်အံ့သြနှစ်သစ်ကူးရဲ့မီးရှူးမီးပန်းများ display ကိုဖမ်းယူဖို့, Airfilms Productions BV, ဝေဟင်ပုံရိပ်န်ဆောင်မှုအထူးပြုတဲ့ဦးဆောင်ဒတျချြထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားများကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်, ထိုအမြင့်ဆုံး ကမ်ဘာပျေါတှငျလူလုပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ ဒူဘိုင်းမီဒီယာ Inc ကိုနှင့် တွဲဖက်. Elite ရုပ်ရှင် FZ LLC တို့ကကန်ထရိုက် ...
အေ့စ်စီးရီး Pair ကို -2Barco ကုန်ပစ္စည်းများ featuring
(မူလက "ဘယ်လ်ဂျီယံအမေရိကန်ရေဒီယို Corporation" အတွက်မတ်တပ်ရပ်ရသော) Barco တည်ထောင်သူ, Lucien De Puydt, US မှာလုပ်အစိတ်အပိုင်းများကနေရေဒီယိုထုတ်လုပ်မယ့်ကုမ္ပဏီနေသူများကဖန်တီးသောအခါ, Poperinge, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် 1934 အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တီဗီ - Barco 1949 အသုံးပြုပုံကဆက်သွယ်ရေးနှင့်မီဒီယာကမ္ဘာ၏အခြားအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြောင်း၎င်း၏ရေဒီယိုလိုင်းနှင့်အတူဒါကောင်းစွာပြု၏။ စတင်ခြင်း ...
Retools အရောင်းမော်ဒယ် US မှာတားမြစ်ထား, မိတ်ဖက်များနှင့် Reseller များမှတဆင့်ဖောက်သည်အာရုံစိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
လန်ဒန် - ဇန်နဝါရီ 14, 2015 - တားမြစ်ထား Technologies က Plc (AIM: FBT), စျေးကွက်-ဦးဆောင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်း Forscene ၏ AIM-ကိုးကားပိုင်ရှင်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, ကဖို့တိုက်ရိုက်ထံမှရွှေ့ဖို့က၎င်း၏မြောက်အမေရိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် တစ်သွယ်ဝိုက်အရောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုမော်ဒယ်။ တားမြစ်ထားသည်၎င်း၏ Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယား, ရုံးပိတ်မယ့်အစားဗြိတိန်ကနေဖြစ်စေ client များကိုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် ...
ဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်လေးခုက New Web ကိုရေဒီယိုလိုင်းများပေါ်သို့ Programming Extend မှ Digigram IQOYA * LINK / LE အသုံးပြု
ယနေ့ဆိုးလ်, ကိုရီးယားအခြေစိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက် (BTN) ကို IQOYA အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုအင်တာနက်ရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည် Digigram - ဇန်နဝါရီ 14, 2015 - Digigram ပေး Audio-ကျော်-IP ကို ​​codec မှလွဲ. ယုံကြည်စိတ်ချရသော MONTBONNOT, ပြင်သစ်နှင့်အတူအသံလွှင့်-အရည်အသွေးအသံပေး * LINK / LE အသံ-over-IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်။ လေး Digigram IQOYA * LINK / LE IP ကိုအသံ codec လေးယောက်ရိုး, ယုံကြည်စိတ်ချရသော encoding ကနှင့် streaming များသေချာ, System Integration Digicom အားဖြင့်ထောက်ပံ့ ...
Sonnet Technologies က 2015 NAMM Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview
အဆိုပါ 6798 NAMM Show မှာခန်းမတစ်ခု, Booth 2015 Sonnet Technologies ကအတွက် Corning Cable ကိုစနစ်များနှင့်အတူ co-ပြ: အ 2015 NAMM ပြရန်မှာ xMac (TM) Pro ကိုဆာဗာ, Sonnet အဆိုပါ Avid အရည်အချင်းပြည့်မီသော xMac (TM) Pro ကို Server ကို၎င်း၏ဆန်းသစ် rackmount ဖြေရှင်းချက်မည်ဖြစ်သည် built-in Thunderbolt (TM) 2-to-PCI Express (R) ကိုသစ်ကိုကို Mac Pro ကိုများအတွက် (PCIe (R)) တိုးချဲ့ (R) နှင့်အတူ။ အဆိုပါ xMac Pro ကို Server ကိုလုံလုံခြုံခြုံအလျားလိုက်အတွင်းရှိကွန်ပျူတာရှိနေကြပါတယ် ...
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ငှားရမ်းမှုခိုင်မြဲသောမီဒီယာရူပါရုံသည်-တစ်ဦးကရော့ခ်တီးဝိုင်းခရီးစဉ်အပေါ် HVS-390HS ဗီဒီယို Switcher ကိုနယူးယူ
ထင်းရူးပင်,, CA - ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီနှင့်အငှားအိမ်သူအိမ်သားမီဒီယာရူပါရုံယခုနှစ်အစောပိုင်းကတစ်ဦးစွယ်စုံဗီဒီယိုကိုခလုတ်ရှာနေခဲ့ပါသည်သောအခါ, ကုမ္ပဏီ FOR-တစ်ဦးရဲ့ HVS-390HS ယူနစ်လှည့်။ FOR-တစ်ဦးက၎င်း၏အငှားစာရင်းနောက်ဆုံးဧပြီမှခလုတ်အဆိုပါဖြည့်စွက်ကတည်းက HVS-390HS ကြောကျတီးဝိုင်း Avenged ခုနစ်ဆအပါအဝင်မီဒီယာရူပါရုံ '' ဖောက်သည်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှု, ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ...
NUGEN အသံဂီတပညာရှင်များအဘို့အသုံးနယူးအသံ Toolkit ကြေညာ
ထုတ်လုပ်သူ Pack ကို, မာစတာ Pack ကိုများနှင့်ရောနှော Tools များဂီတထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောနှောနဲ့ Master အင်ဂျင်နီယာများ Leeds, ဗြိတိန်အဘို့အ Rich လုပ်ဆောင်မှုနှင့်မြင့်မားသော Value ကိုဝေငှ - ဇန်နဝါရီ 13, 2015 - NUGEN အသံယနေ့ထုတ်လုပ်သူ Pack ကို, မာစတာ Pack ကိုများနှင့်ရောနှော Tools များရဲ့လွှတ်ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်သူများ, ရောနှောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ လိုက်. သုံးထုတ်ကုန်အသစ်အထုပ်။ တစ်ခုချင်းစီကို toolset တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေး ...
အိန္ဒိယမီဒီယာကုမ္ပဏီ F7 အသံလွှင့်သဟဇာတ မှစ. ဘက်စုံဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ DSNG အလှူငှပေးစှမျးတိုးချဲ့
သဟဇာတရဲ့ဘဲဥပုံ (R) 3200 encoding နဲ့ ProView (TM) 7100 IRDs အလှူငှပေး Applications ကို San Jose, ကာလီဖိုးနီးယားထုတ်လွှင့်ဖို့ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့် Bandwidth မှု efficiency နယူး Levels ကိုယူခဲ့ - ဇန်နဝါရီ 15, 2015 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင် ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံ, ယနေ့ကြောင်း F7 အသံလွှင့် Pvt ကြေညာခဲ့သည်။ Ltd. , ခြောက်လိုင်းများနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက်အဓိကမီဒီယာကုမ္ပဏီ - ငါးခုသတင်းနှင့်တဦးတည်း ...
9 ၏စာမျက်နှာ 17«ပထမဦးစွာ...«7891011 » ...နောက်ဆုံး»